Landa izibuyekezo zohlelo lokusebenza leWindows 8 | Izindaba zamagajethi
Yize kuyiqiniso ukuthi izibuyekezo ezizenzakalelayo ku-Windows 8.1 zihlelelwe ukwenziwa ngaphandle kokungenelela kwethu, kungaba nezimo ezithile esingafinyelela kuzo uzidinga ukuzifaka kwikhompyutha ehluke ngokuphelele.
Lapho sikhuluma ngeWindows 8.1 (okuyihlobo lwakamuva kakhulu lohlelo olusebenziswe yiMicrosoft) sizobhekisa ngokuphelele ezinhlotsheni ezi-2 zezinhlelo zokufaka nokuvuselela, ukuba ngabokuqala bakudala nabanye esikhundleni salokho, lokho okubizwa ngokuthi Izicelo Zanamuhla; lezi zokugcina yizo ezitholakala ku-New User Interface (Start Screen) futhi okuzodingeka sizilande noma sizivuselele ku-Windows Store, ngaphandle kwalapho sisebenzisa enye inqubo yokwenza lo msebenzi. Yilokho esizokuphakamisa kule ndatshana, okungukuthi, uku landa futhi ufake izinguqulo ngesandla noma ukuvuselelwa kwalezi Zicelo Zanamuhla.
1 Kungani ulanda ngesandla iWindows 8.1 Apps?
2 Izinyathelo eziphakanyisiwe zokuzilanda mathupha Lezi zinhlelo zokusebenza zesimanje
Kungani ulanda ngesandla iWindows 8.1 Apps?
Ukuze siphendule lo mbuzo othakazelisayo, kufanele sicabangele umsebenzisi njengo ikhompyutha okungenzeka ukuthi awunakukwazi ukungena kuyo i-Inthanethi. Lokhu kusho ukuthi ngaphandle kokuba neWindows 8.1 kukhompyutha, ngaphandle kokuxhumeka kwe-inthanethi izibuyekezo azikwazanga ukwenziwa; Ukuphela kwendlela yokuba nazo kungaba ngefayela elisebenzisekayo lalezi Zicelo Zanamuhla, into esingayilanda kusuka kwikhompyutha ehlukile bese siyiyisa kuleyo engenayo i-Intanethi, sisebenzisa induku ye-USB.
Lesi kungaba yisizathu esikhulu sokuthi umsebenzisi azame landa mathupha lezi zinhlelo zokusebenza zeWindows 8.1; Manje, uma siya esitolo seWindows Store bese siqala ukuphequlula uhlelo ngalunye olukhona lapho, ngeke sikwazi ukubabaza nganoma yiluphi uhlobo lwesixhumanisi sokulanda sabo. Uma siya ku-Start Screen (New User Interface) ye-Windows 8.1, ngeke sikwazi ukubabaza ubukhona bohlobo oluthile lokulanda kulezi zinhlelo zokusebenza esezivele zifakiwe kulolu hlelo lokusebenza.
Uma kunjalo Singathola kanjani ukulanda mathupha lezi zinhlelo zokusebenza zesimanje?
Yilokho esizonikela ngakho le ndatshana, okungukuthi, ukusebenzisa okumbalwa amathiphu namasu okuba nefayela elisebenzisekayo yalezi zicelo zesimanje zeWindows 8.1, etholakala kwikhompyutha ene-Internet. Ngemuva kwalawa mafayela kuzodingeka ukuthi siwagcine ku-pendrive ye-USB, idivayisi yokugcina esingayithatha siyise kukhompyutha engenayo i-Intanethi.
Izinyathelo eziphakanyisiwe zokuzilanda mathupha Lezi zinhlelo zokusebenza zesimanje
Ukufeza inhloso yethu ehlongozwayo, sizothembela kumathuluzi ambalwa ahlongozwa yiMicrosoft, okuthi emehlweni abo bonke ahlala engabonakali nokuthi kusukela manje, ungawazi kahle ukuze ukwazi landa okuphumelelayo kwesicelo sanamuhla noma izibuyekezo zabo; Ukuze wenze lokhu, siphakamisa ukuthi ulandele lezi zinyathelo ezilandelanayo:
Okokuqala kumele siye iwebhusayithi ye-Microsoft Knowledgebase
Uma sesilapha, kufanele sipheqe siye engxenyeni emaphakathi yekhasi lewebhu.
Lapho sizothola uhlu lwezinhlelo zokusebenza zesimanje zeWindows 8.1.
Kuzofanele sithole leyo esinesifiso sokuyilanda.
Lapho ithuluzi lesithakazelo sethu selitholakele, kufanele kopisha inombolo etholakala kukholamu ye-KB.
Manje kufanele siye kwikhathalogu yokuvuselela iMicrosoft ngesixhumanisi esilandelayo, kepha sisebenzisa i-Internet Explorer.
Sizobuzwa faka isandiso esingekhathalogi ye-Microsoft Update, ukwamukela isicelo esinjalo.
Uma sesilapho, sizonamathisela ikhodi esiyikopishe ngaphambilini.
Izosikhombisa imiphumela engeyomabili ama-Windows 8.1 32 no-64 bits.
Kufanele sikhethe eyodwa engenguqulo yesistimu yethu yokusebenza.
Sizobakhetha ngenkinobho yesikwele ebheke ohlangothini lwesokunene.
Kuzofanele sichofoze kusithonjana esingenhla kwesokudla ukulanda ifayela elikhethiwe.
Iwindi lizovuleka ngokushesha ukuze sikwazi ukuthola indawo lapho sizogcina khona ifayela elilandiwe.
Yilokho kuphela esizodinga ukukwenza ukuze sibe nefayela elingelesibuyekezo nokuthi sililandile sisebenzisa le ndlela; ini sizothola ifayili elinesandiso se-.cab ezimweni eziningi, ongakwazi unzip usebenzisa noma yiliphi ithuluzi elikhethekile. Lapho usuwenzile lo msebenzi, ngaphakathi kokuqukethwe uzothola ifayela elinokwandiswa kwe-.msi, okuyi Kuzoba okuphumelelayo okufanele sikusebenzise ukufaka isibuyekezo kunoma iyiphi enye ikhompyutha njengoba besikade siphakamisile phambilini.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » Ungazilanda kanjani ngesandla izinhlelo ze-Windows 8 zanamuhla